Ingabe ngingancelisa uma ngine-COVID-19 noma uma kungenzeka nginayo? – Messages for Mothers
Ingabe ngingancelisa uma ngine-COVID-19 noma uma kungenzeka nginayo?
Ukuncelisa kuyatuswa kubo bonke omama, kuhlanganise nakomama abane-COVID-19 noma okungenzeka banayo. Kuze kube manje, igciwane le-COVID-19 alikatholakali obisini lukamama.
Geza izandla ngensipho imizuzwana engu-20 njalo ngaphambi nangemva kokuncelisa.
Qikelela ukuthi uyazemboza lapho ukhwehlela noma uthimula: yemboza umlomo namakhala akho ngendololwane egobile noma ngethishu lapho ukhwehlela noma uthimula bese uyilahla ngokushesha emgqonyeni ovalekayo ngemva kwalokho ugeze izandla ngensipho imizuzwana engu-20.
Uma une-COVID-19, kufanele ugqoke imaski emboza umlomo namakhala lapho uncelisa. Imaski eyenziwe ekhaya kungaba ngendwangu noma ngesikhafu osiwasha njalo ngemva kokusisebenzisa. Ungayithinti imaski ngesikhathi uncelisa noma lapho uhlezi nosana lwakho.
← Yini evamile ngesikhathi ngikhulelwe –futhi kunini lapho kufanele ngiye khona emtholampilo? → Ngingaluvikela kanjani usana lwami esifweni i-COVID-19?